Mercer အစားအစာများ - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
mercer အစားအစာများ / အားဖြင့် အဒ်မင်
Mercer Foods သည် ယခုအခါ Thrive Freeze Dried Foods ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ “ရှင်သန်ပါ။”. ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အံ့သြစရာကောင်းတယ်။. Thrive Life သည် အေးခဲခြောက်သွေ့မှုတွင် စာသားအတိုင်း ဦးဆောင်သူဖြစ်လာပြီး Thrive life သည် ပိုကောင်းသောအရာများကို လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာအနှံ့ ခေါင်းလှည့်လာခဲ့သည်။; ပိုမိုထိရောက်ပြီး နည်းပညာအရ သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။. Thrive Life သည် အေးခဲခြောက်သွေ့သော အရည်အသွေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ဘားကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။, ဒါပေမယ့် ငါတို့အဲဒီမှာ ရပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။. အအေးခံထားတဲ့ အစားအစာတွေက ပိုပိုပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဖြစ်လာတယ်။, Thrive Life သည် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး ထုတ်ကုန်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။!
စိတ်၏ ကြီးထွားမှုနှင့်အတူ, Thrive Life သည် "Mercer Foods" ဟုခေါ်သော ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အေးခဲခြောက်သွေ့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ချက်ချင်းပေါင်းစည်းကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ Mercer foods llc သည် Modesto CA မှ လည်ပတ်နေသည်။ (Mercer အစားအစာများ ပျော့ပျောင်းသည်။) အေးခဲထားသော သစ်သီးခြောက်များနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အထူးပြုသည်။, အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသို့ ရောင်းချပေးသည်။, အခြားထုတ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။. ဤကြေငြာချက်သည် Thrive Life ကို အအေးခံထားသော အခြောက်ခံစက်များသို့ ပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။, အခြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ, ပေးသွင်းသူများနှင့် တောင်သူများ, အတွေ့အကြုံရှိ စနစ်များနှင့် လူများပါ၀င်သည်။. အအေးခံပြီး အခြောက်ခံခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းသည်။, အရောင်, လေဟာနယ်ထဲတွင် အငွေ့အဖြစ် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အရသာနှင့် အာဟာရပါဝင်မှု.
ဤကြေညာချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဆမတန်ကြီးထွားစေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။! ဤကြေငြာချက်သည် ကိန်းဂဏန်းတိုးတက်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပါသည်။.
အကြောင်းများ Mercer အစားအစာများ: Mercer Foods llc သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို သေချာစေရန် မြောက်မြားစွာသော အစီအစဉ်များနှင့် လက်မှတ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။, အစားအသောက်နှင့် မိလ္လာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။. ၎င်းတို့၏ ပရိုဂရမ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များသည် FDA မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။, USDA နှင့် OSHA. အေးခဲခြောက် အစားအသောက် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။ 100% ဘေးကင်းသည်။, စမ်းသပ်ပြီး ဓာတ်မတည့်မှု ပရိုဂရမ်အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်, Mercer Foods သည် စွမ်းအားတစ်ခုမှ ထုတ်ယူသည်။ 220,000 စတုရန်းပေရှိ ဆိုလာစက်ကွင်း 3,852 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး module တွေ. လယ်ကွင်းမှထုတ်လုပ်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် Mercer အစားအစာစက်ရုံ၏ နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်သော နှစ်လကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်စေရန်အတွက် စမတ်မီးအလင်းရောင်စနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုထားသည်။. Mercer Foods Modesta CA သည် သစ်သီးဝလံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးကို ကျင့်ဝတ်နှင့် တာဝန်သိစွာ ရင်းမြစ်ပါသည်။.
အကြောင်းများ အခြောက်လှန်းထားသော အစားအစာများကို အေးခဲပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။:
မိသားစုများကို ကူညီပေးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာဖြင့် စတင်သည်။, ဒါပေမယ့် Thrive Life က ညစာစားပွဲကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လူတွေကို ကူညီပေးတာကို ဝါသနာပါတယ်။. Thrive Life က ပို့ပေးတယ်။ 5% ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ၎င်းတို့၏ အကျိုးအမြတ်များ, ဆိုလိုတာက မင်းရဲ့ညစာက စာသင်ကျောင်းဆောက်ဖို့ ကူညီပေးနေတာ, အမျိုးသမီးများကို ခွန်အားပေးသည်။, ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အသိုက်အဝန်းများကို တည်ဆောက်ပါ။.